Vegas PBS သည် Volicon Observer ကိုအဆင့်မြှင့်သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ဂတ်စ် PBS အဆင့်မြှင့်မှုများ Volicon Observer တပ်ဆင်ခြင်း
ဂတ်စ် PBS အဆင့်မြှင့်မှုများ Volicon Observer တပ်ဆင်ခြင်း
လေးစားလိုက်နာခြင်း, ငွေတောင်းခံလွှာများနှင့်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း Applications ကိုတစ်ဝှမ်းအပြည့်အဝအလားအလာသိချင်ရင်နီဗားဒါးဘူတာအပ်ဒိတ်များ Volicon နည်းပညာ
ဘာလင်တန်, Mass - ။ ဧပြီလ 30, 2014 - Volicon ယနေ့ဂတ်စ် PBS Channel ကို 10, လူတစ်ဦးချင်းစီအမေရိကတိုက်ရဲ့အများဆုံးကြည့်ရှု PBS ဘူတာ၏တဦးတည်း, ထို Volicon နည်းပညာရဲ့ကြွယ်ဝသောစွမ်းရည်အပြည့်အဝအားသာချက်ယူရန်၎င်း၏ Observer (R) ကိုဗီဒီယိုစောင့်ကြည့်မှုများနှင့်သစ်ထုတ်လုပ်ရေး installation ကိုအဆင့်မြှင့်ထားပါတယ်သော။ ထုတ်ပြန်ကြေညာ ဂတ်စ် PBS underwriters '' အစက်အပြောက်စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းဝေဟင်မှ သွား. , ပြန်လည်သုံးသပ်ထုတ်လွှင့်အကြောင်းအရာအဆင်ပြေဝေးလံခေါင်သီ access ကိုအတူဘူတာရုံအင်ဂျင်နီယာများနှင့်အမှုဆောင်အရာရှိများကိုကွောငျးတငျပွဖို့, On-ဝေဟင်လိုက်နာမှုအာမခံနှစ်ခု Volicon Observer စနစ်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။
"ဟုအဆိုပါ Observer သည့်စနစ်နှင့်အတူကြောင့်အချိန်အများကြီးကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သမျှစွမ်းရည်နှင့်အတူတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့ထုတ်ကုန်တယ်သေချာအောင်သုံးစွဲခဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖွင့်," Winston ဘန်း, ဂတ်စ် PBS လုပ်ကိုင်သောအင်ဂျင်နီယာဌာနအတွင်းဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူကဆိုသည်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Volicon စနစ်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်အစဉ်အမြဲအစိုင်အခဲခဲ့များနှင့်ဌာနဆိုင်ရာများအပေါငျးတို့သမျိုးစုံကနေအသုံးပြုသူများကသူတို့နောက်ကျော dial အပေါင်းတို့နှင့်တကွကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်လွှင့်လိုင်းများပေါ်တွင်ထုတ်လွှင့်သောအကြောင်းအရာများကိုပြန်လည်သုံးသပ်နိုငျပုံကိုအလွယ်တကူချစ်ကြတယ်။ "
ဂတ်စ် PBS Channel ကို 10 လေထုကျော်သို့မဟုတ် cable ကိုပေါ်ငါးနောက်ထပ်ချန်နယ်ကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့် ဂြိုဟ်တု - Vme, ကမ္ဘာ့အမြင်အခင်းအကျင်း, ပြန်ရစ်နှင့်ထီပေါက် Create! အဆိုပါဘူတာရုံက၎င်း၏ ဖန်တီး. Vme channel များကို၎င်း၏အသစ်အဆင့်မြှင့်က၎င်း၏အဓိကဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်သံလိုင်းများအတွက် Off-လေထုနှင့်ကေဘယ်လ်ကြိုးအချက်ပြမှုများကိုစောင့်ကြည့်ဖို့လေးရုပ်သံလိုင်းစနစ်, အဖြစ် Off-လေကြောင်းအချက်ပြအသုံးပြုသည်။ တစ်ဦးကစက္ကန့်နှစ်ရုပ်သံလိုင်း Observer ယူနစ်ဟာအတိတ်ကိုပြန်ကြည့်ခြင်းနှင့်ထီပေါက်၏စောင့်ကြည့်မှုဖွ! channel များကို။
အင်ဂျင်နီယာဝန်ထမ်းလိုက်နာမှုသေချာဖို့ Observer system ကိုအသုံးပြု၏ရှေ့မှောက်တွင်အတည်ပြုရန်နေစဉ် EAS အချက်အလက်များကိုဂတ်စ် PBS အသွားအလာနှင့်အရောင်းဌာနများတွင်သင့်လျော်သော, န်ထမ်းများထုတ်လွှင့်သောအကြောင်းအရာများကိုဖွင့်ဆွဲယူပြီး program တစ်ခုသို့မဟုတ် underwriter ရဲ့အစက်အပြောက်အချိန်ဇယားပေါ်နှင့်နှောင့်အယှက်မရှိဘဲသို့ပွေးကွောငျးဖျောပွဖို့ Observer system ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ။ တူညီသောစွမ်းရည်ဟာထုတ်လွှင့်အစီအစဉ်တွင်အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်. ကြည့်ရှုသူမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ အခွင့်အာဏာအသုံးပြုသူများ Observer system ပေါ်တွင်အကြောင်းအရာဝေးလံခေါင်သီ access ကိုရရှိနိုငျသောကွောငျ့, ဘူတာရုံရဲ့အထွေထွေမန်နေဂျာပင်ခရီးသွားလာစဉ်ထုတ်လွှင့်ထုတ်လွှင့်အပေါ်စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းပညာဂတ်စ် PBS ၏ရှိသူများအပါအဝင်အများပြည်သူအသံလွှင့်န်ဆောင်မှုအတွက်သိသာထင်ရှားသောအခန်းကဏ္ဍကြောင့်မာနထောင်လွှားနေ," အင်ဒရူး Sachs, Volicon မှာထုတ်ကုန်စီမံခန့်ခွဲမှု၏ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကပြောကြားခဲ့သည်။ "applications များအမျိုးမျိုးအတွက် Observer system ကိုပြုကြရန်တွန်းအားပေးခြင်းများ, ဂတ်စ် PBS ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ကြံ့ခိုင်စွမ်းရည်နှင့်ထိုးထွင်းသိမြင် user interface ကိုသူတို့ရဲ့ကျယ်ပြန့်စစ်ဆင်ရေးနှင့်စီးပွားရေးလိုအပ်ချက်များကိုးကွယ်သောနညျးလမျးမြားစှာ၏ Observer နည်းပညာပိုမိုလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်ဆက်လက်များစွာကိုဘူတာ၏တဦးတည်းဖြစ်၏။ "
Volicon နှင့်ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်နှင့်ပတ်သက်ပြီးပြန်ကြားရေးမှာရရှိနိုင် www.volicon.com.
Volicon ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ထုတ်လွှင့်, ကွန်ယက်များ, ကေဘယ်လ်အော်ပရေတာများနှင့်အစိုးရများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့််ထမ်းဆောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမီဒီယာထောက်လှမ်းရေးဖြေရှင်းချက်၏ဦးဆောင်ပံ့ပိုးပေးသည်။ အဆိုပါ Observer (R) မီဒီယာထောက်လှမ်းရေးပလက်ဖောင်း (TM) အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်းနှင့် repurposing, လိုက်နာမှုစောင့်ကြည့်ရေး, ကြော်ငြာစိစစ်အတည်ပြု, အပြိုင်အဆိုင် analysis နှင့်အရည်အသွေးကို-of-service ကိုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုဘို့အစွမ်းထက် tools တွေကိုပေးပါသည်။ Volicon ဖြေရှင်းချက်အင်ဂျင်နီယာထံမှအလုပ်အမှုဆောင် suite ကိုမှမီဒီယာလုပ်ငန်းအားလုံးကိုသက်ဆိုင်သူများအားဖြင့်အသုံးပြုကြသည်။ Volicon စနစ်များကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် 1,000 နိုင်ငံများထက် ပို. အတွက် 65 ဖောက်သည်ထက်ပိုမိုအားဖြင့်တပ်ဖြန့်နေကြသည်။ Volicon ဘာလင်တန်, မက်ဆာချူးဆက်အခြေစိုက်သည်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များမှာရရှိနိုင် www.volicon.com.
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/Volicon/Volicon-VegasPBS-Observer.jpg
အသံလွှင်း အကြောင်းအရာ လေ့လာသူ ဂတ်စ် PBS Volicon 2014-04-30
ယခင်: Nexidia မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေမှုတိုင်းငှားရမ်းချဒ် Rounsavall အရောင်း Lead မှ
နောက်တစ်ခု: WHYY ProTrack ကိုပြန်လည်အကူအညီပေးမည်